“Waxaan Noqon Karayaa Neymar-ka Cusub, Laakiin Ma Doonayo
Rodrygo Goes waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ugu wanaagsan ee usoo baxaysa Real Madrid, waxaanu mar horeba muujiyey awooddiisa iyo hibadiisa ciyaareed oo gaadhsiisay heer uu u ciyaaro Real Madrid, sidoo kalena looga yeedho xulka qaranka Brazil oo uu Neymar garabkiisa istaago.
Jamaahiirta Oo Loo Ogolaaday Inay Garoonka Yimaaddaan
Kaddib markii ay Real Madrid xili ciyaareedkiisii ugu horreysay ee uu soo galay Yurub ay geystay kooxdeeda da’yarta ee Real Madrid Castilla, waqti badan kumay qaadan in markiiba uu Zidane kasoo dallacsiiyo oo uu kooxda koowaad kusoo daro, waxaana uu ku caawiyey toddoba gool oo uu dhaliyey iyo kuwo kale oo uu gacan ka geystay.
Iyadoo ay da’diisu tahay 18 jir kaliya ayuu tababaraha xulka qaranka Brazil ee Tite ku daray liiskiisa oo uu ciyaarsiiyey, waxaana durba taariikhda waddankiisa uu ku leeyahay saddex ciyaarood oo uu xiddigaha waaweyn ka garab dheelay isagoo waliba da’yar ah.
Rodrygo Goes ayay dadka qaarkood barbar-dhigaan Neymar Jr iyagoo ka eegaya heerkooda ciyaareed ee xilligii ay isku da’da ahaayeen, laakiin laacibkan oo su’aashaas uu si rasmi ah u weydiiyey telefishanka CBF TV, ayaa kaga jawaabay: “Tan iyo markii aan xirfaddayda ka bilaabay Santos, waxay iigu yeedhi jireen Neymar-ka cusub ama Robinho cusub.
“Mar walba waxay ahayd tilmaan igu xeeran, laakiin anigu waxaan mar walba sheegi jiray in aan doonayo inaan ahaado Rodrygo oo aan taariikh aniga ii gaar ah samaysto.
“Robinho iyo Neymar waa laba ciyaartoy oo waaweyn u ah Santos, Brazil iyo kooxihii ay usoo ciyaareen. Laakiin anigu hadda ayuun baan bilaabay ciyaaraha, kamana fikirayo inaan ahay Neymar cusub. Waxa jira hal Neymar oo kaliya.”
Rodrygo Goes waxa uu kooxdiisii hore ee Santos u ciyaaray 80 kulan oo kooxda koowaad ah ka hor intii aanay Real Madrid xagaagii 2018 kusoo iibsanin 40 milyan oo Gini, balse waxa uu sii joogay hal sano oo kale maadaama aanu sharcigu u ogolayn inuu safro iyadoo aanay u buuxsamin da’da 18 jirku, waxaana ugu dambayntii uu soo gaadhay caasimadda Spain ee Madrid sannadkii 2019kii.
Taariikhda Real Madrid ayuu galay markii uu saddexley dhaliyey kulankii Champions League ay 6-0 ku garaaceen heerkii groups-ka ee xili ciyaareedkii hore, iyadoo uu waliba xilligaas ku jiray bishiisii ugu horreysay ee kooxda koowaad lagu soo daray.
Abdiwahab Ahmed 214 posts